Ny maha-zava-dehibe ny paikadim-barotra amin'ny horonantsary: ​​statistika sy torohevitra | Martech Zone
Vao avy nizara infographic momba ny maha-zava-dehibe ny marketing amin'ny maso - ary mazava ho azy fa misy video. Izahay dia nanao horonantsary an-taonina ho an'ny mpanjifanay tato ho ato ary mampitombo ny tahan'ny fifamofoana sy ny fiovam-po. Misy karazany maro ny horonantsary noraketina, novokarina azonao atao… ary aza adino ny horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny Facebook, horonan-tsary sosialy amin'ny Instagram sy Snapchat, ary na ny resadresaka Skype aza. Mandany horonantsary marobe ny olona.
Maninona ianao no mila paikady marketing amin'ny video
Youtube dia mitohy ny Tranonkala # 2 be mpitady indrindra ankoatr'i Google. Ny mpanjifanao dia mitady vahaolana amin'io sehatra io… ny fanontaniana dia hoe eo ve ianao sa tsia.
Afaka manampy ny horonan-tsary Tsorina ny dingana na olana be pitsiny izay mitaky lahatsoratra sy sary maro kokoa hahazoana fahazoana hevi-baovao. Ireo horonantsary manazava dia manohy mitarika fiovam-po ho an'ny orinasa.
Manolotra ny fotoana mety ho an'ny fahatsapana bebe kokoa… Ny fahitana sy ny fihainoana dia manatsara ny hafatra sy ny fahitan'ny mpijery azy azy.
Drive video taha ambony amin'ny click-through amin'ny doka, valin'ny motera fikarohana ary fanavaozana ny haino aman-jery sosialy.
Ny olona manana ny fahaiza-mitarika sy ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia manome bebe kokoa akaiky traikefa ahafahan'ny vazivazy, ny fanintona ary ny fifampitokisana ampitaina tsara amin'ny mpijery.
Ny video dia mety ho betsaka kokoa voly ary mirotsaka noho ny lahatsoratra.
Olona 75 tapitrisa any Etazonia no mijery horonantsary an-tserasera isan'andro
Ny mpijery mitazona ny 95% -n'ny hafatra iray rehefa anaty horonan-tsary raha ampitahaina amin'ny 10% rehefa mamaky azy amin'ny soratra
Ny horonan-tsary sosialy dia miteraka fizarana 1200% betsaka kokoa noho ny lahatsoratra sy sary atambatra
Ny horonan-tsary ao amin'ny pejy Facebook dia mampiakatra 33% ny fifandraisan'ny mpampiasa farany
Ny fanonona fotsiny ny teny hoe video ao anaty tsipika lohahevitra mailaka dia mampitombo ny tahan'ny click-through hatramin'ny 13%
Ny horonan-tsary dia mitarika fiakarana 157% amin'ny fivezivezena biolojika avy amin'ny pejin'ny valin'ny Search Engine
Ny horonan-tsary tafiditra ao anaty tranokala dia afaka mampitombo ny fifamoivoizana hatramin'ny 55%
Ireo mpivarotra mampiasa horonan-tsary dia mitombo ny vola miditra 49% haingana kokoa noho ireo mpampiasa tsy horonan-tsary
Ny vidéo dia afaka mampitombo ny fiovan'ny pejin'ny 80% na mihoatra
76% ny matihanina amin'ny marketing dia mikasa ny hampiasa horonan-tsary hampitomboana ny fahafantaran'izy ireo ny marika
Toy ny paikady atiny hafa rehetra, ampiasao ny video mba hahazoany tombony lehibe indrindra. Ireo mpivarotra dia tsy mila manana horonan-tsary zato any… na dia topimaso fotsiny momba ny fitarihana orinasa iray aza, horonantsary manazava izay manazava zavatra sarotra iray, na fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny paikadim-barotra nomerika anananao.
Ny zavatra iray tsy tiako horesahina amin'ity infographic ity dia ny fahitana ny sain'ny olona lasa kely noho ny an'ny trondro volamena. Tsy izany no izy. Vao avy nijery tamin'ny vanim-potoana iray manontolo ny fandaharana iray tamin'ny faran'ny herinandro aho… zara raha misy olana amin'ny fahita lavitra! Ny zava-nitranga dia tsapan'ny mpanjifa fa manana horonantsary izy ireo safidy, ka raha tsy manintona ny sain'izy ireo ianao ary mitazona izany ao amin'ny horonan-tsarinao, dia hifindra any amin'ny toerana hafa afaka segondra vitsy izy ireo.
Ity ny infographic, Ny maha-zava-dehibe ny marketing video, avy amin'ny IMPACT.
Tags: horonan-tsary bilaogyhoronantsary pejy fipetrahanaLahatsary Marketinghoronantsary mpanazava ny vokatrahoronantsary media sosialyhoronantsary sosialysyndacastkarazana videovideo marketingvideo seokarazana videohoronan-tsary webinartranonkala mahery fo